बबईमा विहीवार थप २ जनामा कोरोना पुष्टि « Online Rapti
बबईमा विहीवार थप २ जनामा कोरोना पुष्टि
दाङ : दाङको बबई गाउँपालिकामा विहीवार थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राप्ती स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको परिक्षणमा बबई गाउँपालिका ६ का २२ बर्षिय पुरुष र वडा नं. ७ का २५ बर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनीहरु विदेशबाट आए होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । तर उनीहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसे पनि उनीहरुको सम्पर्कमा गाउँका केही युवाहरु गएकाले वडा नं. ६ को टिकुलीगैरा गाउँ सिल गरिएको वडाध्यक्ष राम बहादुर डाँगीले बताए ।
‘ उनीहरु विदेश मै पिसीआर परिक्षण गरी नेपाल आउदाँ रिर्पाेट नेगेटिभ आएको रहेछ ,’ उनले भने ,‘ त्यसपछि हामीले सुरक्षित तरिकाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएको थियौँ । उनीहरु घर देखि बाहिर त गएन् । तर उनीहरुलाई भेट्ने गाउँका ८/१० युवाहरु गएका रहेछन् । ’ त्यसैले गाउँ शिल गरी उनीहरुलाई आफुहरुको सम्पर्कमा ल्याएको र स्वाब परिक्षणको लागी तयारी गरेको वडाध्यक्ष डाँगीले बताए ।
बबई गाउँपालिकामा केही दिन अगाडी समुदायस्तरमा कोरोना भएन नभएको पत्ता लगाउनु विभिन्न ५७ जना ब्यक्तिहरुको स्वाब संकलन गरी परिक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक हरि बहादुर खड्काले जानकारी दिए । हाल सम्म गाउँपालिकामा २९ जनामा कोरोना पुष्टि भएता पनि २४ जना निको भएर घर गएको उनले बताए ।